Pcb ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, သတ္တု Pcb, Flexible ဘုတ်အဖွဲ့ - Yongmingsheng
With over 10 years as an industry leader, YMS is one of the most experienced PCB assembly and PCB ထုတ်လုပ်သူ in China.
We specialize in providing companies of all sizes with full-range and high-quality PCB ထုတ်လုပ်မှု,PCB assembly services. We can cover from quickturn PCB prototyping to full production, part kitting to full turn-key assembly and PCB design instructions to PCB material suggestions. And We ship internationally, so regardless of where your company is located, explore our wide range of PCB services today. Our one-stop PCB production solutions shorten your products’ time to market, dramatically improving return on investment (ROI) of OEMs.
HDI pcb3+ N +3Laser သည်ကြေးနီဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောကန့်လ ...
သတ္တုအမာခံ PCB embedded ကြေးနီအကြွေစေ့ pcb အပူ ...
ခိုင်မာသော flex pcb ဒီဇိုင်း HDI ...
Rigid flex pcb အလွှာ FPC မျက်စိကန်း။ သင်္ဂြိုဟ် ...
မာကျောသော flex pcb အလွှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် pcb HDI မဆို ......
PTFE နှင့် FR4 ထုတ်လုပ်သောကြိမ်နှုန်းမြင့် PCB များ ...
HDI pcb မည်သည့်အလွှာ hdi pcb မြန်နှုန်းမြင့်သွင်းမှု ...
LED မျက်နှာပြင် pcb HDI လေဆာရောင်ခြည် PAD ရဲမှ ...
အလွှာ pcb Sideplating ရွေးချယ်သောခက်ခဲရွှေ ...
တရုတ်အမျိုးသားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ LED Light Flexib ...
Flex တင်းကျပ်သောဘုတ်အဖွဲ့ Semi Flex PCB Black Soldermask ...
YMS အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ဂျပန်, ဂျာမဏီ, ထိုင်ဝမ်, စသည်တို့နှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၏တိုးကနေခေတ်သစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများ & software ကိုမိတ်ဆက်ပိုက်ဆံအမြောက်အမြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် 10 နှစ်ကျော်အတူ, YMS တရုတ်နိုင်ငံတွင်အများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိ PCB နှင့် PCB စည်းဝေးပွဲကိုထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က high-quality PCBs ထုတ်လုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံး PCB ပရိသန်ဆောင်မှုများကိုဂုဏ်ယူကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အလွယ်ဆုံး Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ခွဲခြားခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
YMS ထုတ်ကုန်များအပြည့်အဝအကွာအဝေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေ့ဆုံရန်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ချီတက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောနှစ်ချက်အလွှာဘုတ်အဖွဲ့ 48 နာရီအတွင်းကယ်မနှုတ်နိုင်; 4-6 အလွှာ 76 နာရီအတွင်းကယ်မနှုတ်နိုင်; 8-12 အလွှာ 96 hoursour အတွင်းကယ်မနှုတ်နိုင်; 14-18 အလွှာ 120 hoursour.products အတွင်းကယ်မနှုတ်နိုင်ပါဝင်သည်: HDI, ထူထပ်သောရွှေဘုတ်အဖွဲ့မြင့်မားသိပ်သည်းဆ multilayer ဘုတ်အဖွဲ့, မျက်စိကန်းသောသင်ျဂွိုဟျအပေါက် multilayer ဘုတ်အဖွဲ့, အလူမီနီ PCB, တင်းကျပ် Flex + ကြေးနီအလွှာ, တင်းကျပ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေါင်းစပ်ဘုတ်အဖွဲ့, အထူးဘုတ်အဖွဲ့။
YMS ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဓိကကယုံကြည်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကုမ္ပဏီအမိန့်ထံမှ package.We မှပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာများအားဖြင့်ကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထားသည့်အရည်အသွေးအ ISO9001, ISO14001, ul, CQC စသည်တို့ကိုတူသောအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းအတည်ပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန် '' အရည်အသွေးမြင့်၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်တစ်ဦးအသံအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်တားဆီးရေးစနစ်ထူထောင်ကြပြီ။
Pcb , Mutilayer Pcb , Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ , ၂ အလွှာရှင်းလင်းသောဘုတ် , လျင်မြန်စွာပြန်လာ Pcb , Mutilayer Fpc ,